Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Biyaha Wabiga Shabeele ee ay Leexsatay Dowladda Itoobiya (Dhagayso)
March 28, 2016 – Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay inay hayaan Xog ah in la leexiyay Wabiga shabelle ee nooga yimaada Dhinaca dalka Itoobiya islamarkaana taas ay keentay in wabigu uu biyo yareeyo.
Wasiir Maareeye ayaa Xusay in Dowladda federaalka ay wado Dadaalo dowladda Itoobiya ay kala hadleyso Xiritaanka Wabiga Shabelle,waxaana uu xusay in Dowladda Soomaaliya ay Itoobiya kala hadleyso sidii loo wada Isticmaali lahaa Biyaha Wabiga Wabiga shabelle.
Wabiga Shabelle oo mara gobolo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ah ayaa gabi ahaanba biyihii ka gureen, wuxuuna wabigu Biyo yareeyay bilaabay Bilihii ugu dambeeyay,iyadoo hadda Meelaha qaar uu Wabigu lahayn wax biyo ah oo ay tuulooyinka qaar dadkii haraad u dhinteen.
March 28, 2016 tuugahaladilo2015
One Response to Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Biyaha Wabiga Shabeele ee ay Leexsatay Dowladda Itoobiya (Dhagayso)
Masuul Sare March 28, 2016
umad baa le’aneysa waxad meesha lasoo taagantahay dawlada qorshaheeda way ku jirta …. adiga maahane waxad cuni lahayd ayaa meel kuu saaran ogow madaxtooyada way soo gaareeabaartu hadii ay wabiyadu qalalaan meel nabad galeyso majirto …. mida kale ninkaan Reer woqooyiga ah awal ayeysan SOMALIland nagu soo biireyn ee dhagarta uu maleegayo EEBE hanaga qabto …lug baa u laaban kolleeye, War Hooy SOOMAALIYEED inagey noo taalaaye aan isu gurmano ka shacab ahaan Goballada maalinba midkey dhib haysato haloo gurmado warbaahintu umadda SOOMAALIYEED iney beel caalam sugin isuna gurmato haku wacyi galiso oo ha barto #SOOMAALIYA Hanoolaato